Patrice Beaumelle – Mpanazatra an’i Cote d’Ivoire « Mafy ny ady amin’ny ekipam-pirenena Malagasy »
Nicolas Dupuis “Hifanasaka ny Staff Malagasy sy Frantsay an’ny Barea”
Ankoatry ny fampahafantarana ireo 25 mirahalahy voaantso hiomana amin’ny fiatrehana an’i Cote d’Ivoire manomboka ny 14 novambra izao dia nampahafantatra ireo mpiara-miasa aminy eo amin’ny fanomanana ireo
Jocelyn Razafimamonjy – FMF “Tsy afaka hahazo lalao ara-pirahalahiana ankoatry ny teo isika”
Efa milamina ny momba ny kianjan’i Barikadimy handraisana ny lalaon’ny ekipam-pirenen’i Cote d’ivoire sy Madagasikara amin’ny 14 novambra izao, hoy
Ultra Trek des Collines Sacrées de l`Imerina Efa misokatra ny fisoratana anarana
Ho tanterahina ny 20 hatramin` ny 22 novambra izao ny Ultra Trek des Collines Sacrées de l`Imerina (UTCS) taona 2020, fifaninana dian-tongotra arahina hazakazaka, miainga avy eo Ambohitrimanjaka hatrany amin` ny vohitr` Ambohimanga.
Nanambara omaly ny mpanazatra ny ekipam-pirenena ivoarianin’ny baolina kitra, Patrice Beaumelle, fa naharesy lahatra mpila ravinahitra miisa dimy milalao anatina klioba divizionina voalohany italianina handrafitra ny Elefantan’i Cote d’Ivoire.
Mafy ny ady, hoy izy, fa ny ekipam-pirenena Malagasy taloha izay resintsika in-telo dia nivoatra be. Raha ny fanazavany hatrany dia ahitana vodilaharana miisa 2, mpiandry harato 1, lohalaharana miisa 2 ireto mpilalao voaantso vaovao ireto. Ho ambara tsy ho ela, hoy izy, ny momba azy ireo. Na dia mikorontana aza ny fifidianana izay ho filohan’ny federasionina ao an-toerana noho ity fandrarana ilay kintana fahiny, Didier Drogba, ity dia hita ho miezaka mametraka ambiansy handaminana ny sain’ireo mpilalaony sy ny mpanohana ny Elefanta ity mpanazatra ity. Tsy vao sambany anefa, raha tsiahivina, ny nananan’ity ekipa ity, lisitra mitandroka toy izao saingy in-droa resin’ny Egyptianina izay tsy dia nanana mpilalao malaza firy ihany izy ireo nandritry ny taona 2006. Ny fahaiza-miaraka anaty ekipa noho izany no tena antoky ny fahombiazana ary azon’iza na iza resena ireto Elefanta ireto.